PCB ọkachamara na-enye ego PCBs maka quantities dị ka obere ka 1 ibe dị elu dị ka 5,000 iberibe. Ke adianade do, anyị PCB emepụta anya ihe ọ bụla imewe nwere emehie ihe. Nke a na ọrụ ike ẹkụt na kasị PCB Ụgha ụlọ. Ọzọkwa, anyị na-agbaso nnọọ ike PCB manufacturingworkflow iji hụ na elu mma nnyefe. Golden Triangle PCB ahịa na-abịa site a nnukwu iche iche nke ọrụ na azụmahịa agba, dị ka okporo ọkụ, enterprise Mgbakọ, ịkparịta ụka n'Ịntanet na telekomunikashions, wireless ahịa, ọgwụ na ahụ ike na ndu, ulo oru na agbakwunyere systems, netwọk nchekwa, akpakanamde electronics, digital ji egwuri egwu, laabu ngwá, wdg ọ bụ ya mere ị pụrụ ịdabere na anyị PCBAmanufacturing na PCB nzukọ ọrụ. Dị ka n'ime ebe a, anyị na-edebe akụkụ nke anyị ahịa ikpe gị akwụkwọ. Anyị nwere ike ime ka ị were. Ke ofụri ofụri, anyị zuru ụwa ọnụ ahịa na-esonụ amụta ọrụ anyị: ngwa ngwa, nwee ezi uche price larịị, top ahịa n'ọnọdụ, àgwà nkwa.
Golden Triangle PCB nyekwara n'elu 10 nde USD maka factory ụlọ ọrụ, gụnyere PCB na PCBA nzukọ equipments (Acid Ọla kọpa Site-onu plating, CNC Drilling, PCB etching Machine, PCB igwe Machine, n'elu Ugwu Machine, Reflow oven, akpaghị aka Optical Nnyocha (AOI) , Wave jikọtara) na a na nkà mmụta sayensị usoro nke management, site na nke gị PCB na PCB nzukọ chọrọ nwere ike-emezu elu àgwà na dị nke mba ụkpụrụ.
Nta malite ịgba size of 0.1mm (~ 4mil)
1 36 n'ígwé
Isiike (ọkọlọtọ FR4), Flex, Aluminium kụziri.
FR4 *, Rogers, Duriod, Polyimide, CEM1,3, wdg
PCB Ụgha ọkpụrụkpụ malite na 8mil maka isiike na 0.2mm maka Flex.
0.4 ounce 4 ounce ọla kọpa
Kacha nta Trace / Space nke 3mil.
Risịrị agụnye; imikpu Gold, Silver, gbamgbam, Lead free HASL na OSP.
Board imecha agba; Green, Blue, Black, Yellow, Red, White.
Anyị na-ahọrọ A + ọkwa copperplate iji hụ anụ arụmọrụ (general fr-4) nke PCB Ụgha. N'oge PCBA n'ichepụta usoro, akpaka ọla kọpa plating edoghi na elu-ọsọ-egwu igwe (ika: TMAX) na-eme ihe ziri ezi ma na ngwa ngwa nnyefe na-ekwe nkwa. All biri ebi circuit iba ga-ahụrụ site elu akpaka-efe efe nyocha igwe (ma ọ bụ ule eku) na ụdi nkebi iji jide n'aka na onye ọ bụla PCB bụ OK si n'ime na sekit na sekit na n'èzí udi. Na mbụ ogbo nke PCB imewe, usoro iheomume bụ mgbe nnọọ oké mkpa. Anyị ngwa-uzo maka PCB nzukọ prototyping, Eco (Engineering mgbanwe iwu) na BGA reballing / rework ọrụ na-eweta gị ụzọ oge na kasị elu a, n'agbanyeghị iji olu (dị ka obere ka otu). Anyị 20 awa PCB sample awara awara ozi ododu a ndụ nchekwa maka nnukwu ọtụtụ ngwaahịa imewe ìgwè n'ihu echesinụ deadlines. Anyị engineer ga-eso na nlezianya na nụchara anụcha PCBA workflow ịrụ usoro nke PCB n'ichepụta na PCB mgbakọ. Anyị PCBA mbadamba na n'ọtụtụ ebe, na-eje ozi maka ndị ahịa nke a dịgasị iche iche nke ọrụ, dị ka ụgbọala, ọgwụ & ahụ ike, usoro kaadị, na n'ji ngwá electronic. N'ozuzu, anyị mezuo ụkpụrụ nke ISO quality management na IPC-A-610E nile n'ụzọ nke na-abata ihe, na ihuenyo obibi, SMT, aoi, ipqc, itinye na PCBA ule. Ke ofụri ofụri, gị PCB prototype nwere ike ọma eje ozi site anyị. Ebe ọ bụ na anyị na-enweta gị ngwaahịa debara aha solution, niile ụdi usoro ga-achịkwa anyị na nlezianya PDCA management workflow. Anyị raara nye injinia ga na-ekwurịta okwu na-adọ gị na-edozi nsogbu ọ bụla. Ọzọkwa, anyị zuru ụwa ọnụ PCBA n'ichepụta ike nwere ike belata gị na-eri ihe karịrị na-atụ anya na enweghị ihe ọ bụla hassle. Anyị ga-adị gị mma PCB emeputa na PCB nzukọ ibe.
(N'ihi na ihe osise biko pịa ebe a)
Anyị na-ahọrọ n'elu mpempe akwụkwọ suppliers iji hụ anụ arụmọrụ (general fr-4). N'oge n'ichepụta usoro, akpaka ọla kọpa plating edoghi na elu-ọsọ-egwu igwe (ika: TMAX) na-eme ihe ziri ezi ma na ngwa ngwa nnyefe na-ekwe nkwa. All biri ebi circuit iba ga-ahụrụ site elu akpaka-efe efe nyocha igwe (ma ọ bụ ule eku) na ụdi nkebi iji jide n'aka na onye ọ bụla PCB bụ OK si n'ime na sekit na sekit na n'èzí udi.
Dị iche iche na PCB Manufacturing
Anyị nyekwara n'elu 10 nde USD na PCB equipments tinyere electroplate edoghi, mkpọpu ala igwe, na-efe efe nyocha, ederede screener wdg All nke a bụ maka àjà ị ikike nke ọnwa 15,000 square mita PCB n'ichepụta, nke bụ na ọdabara maka obere-ajụ-nnukwu azụmahịa iwu . Iji izute a dịgasị iche iche nke n'ọma ahịa chọrọ, anyị na-eme si dị iche iche n'ichepụta ngwọta maka esonụ PCB ụdị. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịchụkwudo ahịa ịgbasa mkpa site na anyị na-agbanwe ọrụ.
Mgbanwe e biri ebi circuit n'ichepụta HDI PCB n'ichepụta Aluminum PCB n'ichepụta
Isiike Flex PCB n'ichepụta Carbon ink PCB n'ichepụta Blind lie via PCB n'ichepụta
Arọ ọla kọpa PCB n'ichepụta Impedance PCB n'ichepụta Ọkụ osisi PCB n'ichepụta
Nnù-spec PCB n'ichepụta Automotive PCB n'ichepụta Network nkwurịta okwu PCB n'ichepụta
Backplane PCB n'ichepụta Ebute free PCB n'ichepụta Ala na-eri PCB n'ichepụta
4 Layer PCB n'ichepụta 6 Layer PCB n'ichepụta 8 Layer PCB n'ichepụta
Ozugbo ị dechara PCB n'ichepụta usoro, ugbu a ọ bụ oge iji kwadebe na-abata ihe dị ka BOM ndepụta na malite na PCB nzukọ na-adọ ma ọ bụ chọpụta azụ ndị PCB imewe. Ọzọkwa maka nkọwa ndị ọzọ, ị nwere ike inyocha ihe na ọrụ anyị.